Mateki ekunyepera, mhinduro yeakanyanya kusagadzikana | Kunyora
ari ma tatoo kunyepa (kuvadaidza neimwe nzira) zvese izvo zvigadzirwa zvinokutendera iwe kupfeka chimwe chinhu "chakatemerwa nyora" paganda pasina kurwadziwa kana padanho rekuzvipira iro rinodiwa nyora nyora.
Ndokusaka nhasi tichazotaura nezvazvo ma tatoo nyepera, sarudzo yeavo vanoda kurovedza vasati vatora, uye zvakanyanya kutaurwa kwesarudzo (kunyangwe isu taigona zvakare kunge takataura, sekune dzimwe nguva, dzedzimwe mhando dzematatoo enguva pfupi).
1 Ndezvipi zvisarudzo?
2 Uye mazuva ano?
Zviratidzo rudzi rwekunyepedzera kana kwenguva pfupi nyora ine mufananidzo unorapwa ne turpentine iyo inouya yakanamatira pamakadhibhodi uye kuti, mushure mekuinyorova, unogona kuibvisa kuitira kuti mufananidzo urambe wakanamatira kuganda rako.
Mumakumi mapfumbamwe vaive chipo chechipo chezvigadzirwa zvakaitirwa vateereri vevana, senge kutsenga chingamu, machipisi, makeke ... Kwechizvarwa ichocho, muchokwadi, kwaive kwekutanga kusangana nematattoos. Pakanga pasina chinhu sekukwira bhasikoro rako kuburikidza nekambi yekuzvitutumadza uchitamba chinamirwa cheSpiderman paruoko rwako. Muchokwadi, zvaive zvakajairika kwatiri kuti tigume nekuzadza nemazaya kana mwaka wezhizha wapera nekuti ganda raive riine decal harina kuita brown.
Uye senge zvese zvinova zvemufashoni, zvaitova neyavo mataundi edhorobha, kubvira makuhwa akataura kuti mamwe ematatoat emanyepo akatakura LSD akaiswa pamuviri iyo yakaita kuti vana vabatikane nezvinodhaka. Ehe, dzaive nhema.
Uye mazuva ano?
Parizvino unogona kutenga mazhinji eaya ekunyepedzera nyora, ayo akasangana nekuzvarwa patsva kwakasiyana pane kwaitarisirwa, nekuti iwo haasisiri ekushambadzira zvigadzirwa zvinoitirwa vana. Hazvisi zvakajairika kuwana madhiri ekutengesa nemagadzirirwo akanaka iwe aunogona kupfeka husiku hwese sekunge yaive nyora.
Muchokwadi, kune vamwe kunyange avo vanovashandisa senge rudzi rwekudzidzisa kuti vaone kana dhizaini kana nzvimbo inovagutsa. Kunyangwe pasina chinhu chakafanana nematoto chaiwo, hongu!
Tinovimba iwe wakafarira ichi chinyorwa pamatepi ekunyepera, kunyangwe isu tichinyatsoda izvo zviri nani. Tiudze, une chero nyora dzakadai here? Wakamboedza zvirevo here? Tiudze zvaunoda, iwe unotofanira kutisiira mhinduro!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kunyora » Mhando dzematatoo » Mateki ekunyepera, mhinduro yeanonyanya kusagadzikana
Miley Cyrus debuts nyowani nyowani yakasainwa naDoctor Woo